အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အွန်လိုင်းမှချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ဒါဟာကမ်းလှမ်းအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ကိုချစ်၊အချိန်ဖြုန်း၊ရှာတွေ့နဲ့တူ-စိတ်တူကိုယ်တူလူတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေ၊အပေါင်းအဘော်၊စုစည်းပြီးသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအသက်တာ။ အတွင်းရှာနိုင်ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊မြို့၊ကျားမ၊အသက်အရွယ်၊နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အချမီနူးစာရင်းအားလံုးကကြော်ငြာတွေဤအမျိုးအစား။ ဒီအစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အမည်မသိအသုံးပြုသူများအဖို့သူရေးသားနိုင်တိုတောင်းတဲ့သတင်းစကား(စာ)။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ပါဝင်တဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအတူကတစ်သန်းအသုံးပြုသူများ။ နေ့တိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်ကြီးမားသောအရေအယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏၊အဘယ်သူသည်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ထက်တွေ့နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော၊ အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲဒီချက်တင်နှင့်အခြားသူများနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်ရွေးချယ်ဖို့ဆက်သွယ်? အဓိကကွာခြားချက်အကြားစကားပြောသည်များ၏မရှိခြင်းအဆိုနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၊လင့်ခ်၊သို့မဟုတ်ပေါ်လာပါတယ်ည့္ခ်ိန္အနိုင်လုအစိတ်ဓါတ်များနှင့်ပိုဆိုးလာတယ္။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒီစကားပြောခဲ့သူများကဖန်တီးသောသူလူများအတွက်အခက်အခဲတစ်ဆက်သွယ်ရေး၏။ မှကျေးဇူးတင်စကား၊သင်သာဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူ၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများ၊ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုဖြည့်ဆည်းတူညီလူတစ်ဦး၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကျမတို့တကယ်ကြိုက်။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊မည်သည့်အချိန်တွင်အများအနေ့၌၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အ နှင့်အတူအဘယ်သူကိုများအတွက်အများကြီးသုံး။ သင်ကြိုက်လျှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဟေဠိ၊ဤသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာကိုပြောပြ။ ဆိုေသာအစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း။ သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဆက်သွယ်ပြီးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း။ သင်သည်လည်းဖန်တီးအတုမိသားစု။ ထို့အပြင်၊တစ်ခုတည်းသောအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလက်ဆုံဖန်တီးနိုင်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သောပုံရိပ်ကိုမှလုိုက်သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်။ ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ၊သင်၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဓာတ်ပုံ။ ငါတို့သည်လည်းရှိသည်ဘယ်မှာဖိုရမ်တစ်ခုကို ဒါဟာကရှင်းပြသည်လူအပေါင်းတို့မေးခွန်းများကိုသင်အဖြေကိုရှာဖို့။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမေးရန်ပင်ကိုအများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့မေးခွန်းများကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သင်သာလူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ဒါပေမယ့်လည်းအတွေ့များစွာသောအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူအဘယ်သူသင်မျှဝေနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားသံကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ချိန်းတွေ့၊လူတိုင်းအတွက်ဆက်သွယ်ရေး၊ချိန်းတွေ့နှင့်အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ! ကျနော်တို့မမေ့သင်သို့မဟုတ်အလုပ်သင်ကိုယ်သင်၏နှလုံး! သငျသညျဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မည်သင်၏အချိန်နှင့်အတူ။ ဤသည်မသာသည့်ကြော်ငြာနှင့်ဇာတ်လမ်း၏အလုပ်အဘယ်သူသည်များစွာသောလူအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊သင်ပြန်
အမွတ္ဒုတိယစာသင္ႏ? မည်မဟုတ်စောင့်ရှောက်လျှင်တင်ထားသောဓါတ်ပုံအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ကျွန်မတို့ကမသိဘူး၊ဒါပေမယ့်လူကိုခံစားရတစ်ခုမီးလောင်သောအာရုံအရှက်ကွဲခြင်း၏အခါကြည့်ရှု၏ဓါတ္ပံုမိန်းကလေးများနှင့်အတူချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ လမ်းဖြင့်၊ထိုယောက်ျားလေးများလည်းအရှက်။